Ungazilungisa njani iingxaki zonxibelelwano lweBluetooth kwi-iOS 10 | IPhone iindaba
Ungazilungisa njani iingxaki zonxibelelwano lweBluetooth kwi-iOS 10
Siyaqhubeka noluhlu lwethu olulungileyo lwecattails ukusombulula iingxaki zokusebenza kwi-iOS 10. Nangona kunjalo, iApple iyaqhubeka nokusebenza kuhlaziyo, njengoko usazi kakuhle, iqela lophuhliso laseCupertino kutshanje lithumele uhlaziyo olusombulule ezinye iingxaki zokuhambelana kwe-iOS, nangona kunjalo, kusekho ezinye iziphene ezithintela ukusebenza ngokuchanekileyo kwesixhobo. Namhlanje ngeCawa sifuna ukukubonisa indlela yokusombulula ezinye iingxaki zonxibelelwano zeBluetooth eze ne-iOS 10. Ngaphezulu kwayo yonke le nto, le ngxaki ibangela ukusikwa kokudlala xa sisebenzisa izithethi zeBluetooth okanye ii-headphone ezinetekhnoloji yokuhambisa efanayo.
Njengesiqhelo, sicebisa ukuba sithathe amanyathelo angaphambili ukuqinisekisa ukuba asilahleki nanto. Funda imiyalelo ngokufanelekileyo, kwaye ungathathi naliphi na inyathelo elivelisa naluphi na uhlobo lokuthandabuza okanye ongaluqondiyo. Yenza i-backup, nokuba ikwi-iCloud okanye kwi-iTunes, ke siya kuqinisekisa ukuba ngokutshintsha useto sinokubuyisela isixhobo kuhlobo lwangaphambili olwaluquka wonke umxholo wethu. Kwaye okokugqibela, ukuba unayo nayiphi na imibuzo, yiya kwibhokisi yezimvo, uluntu lwethu lwabafundi, kunye nabahleli, baya kukunceda kangangoko kunokwenzeka, okwenza kube lula kakhulu ukusebenzisana nolu hlobo lwezifundo.
1 1. Cima iBluetooth kwaye ubangele ukuqala kwakhona kwinkqubo
2 2. Khohlwa isixhobo seBluetooth uze uqhagamshele kwakhona
3 3. Buyisela useto lwenethiwekhi
4 4. Ukuxilongwa kwesixhobo ngu-Apple
1. Cima iBluetooth kwaye ubangele ukuqala kwakhona kwinkqubo
I-Bluetooth yeyona teknoloji inika ukusilela ngakumbi nge-iOS 10. Siza kuzama eyokuqala kwaye icace gca yeendlela zakudala zokulungisa izinto kwihlabathi lekhompyuter, ukuqala kwakhona. Okokuqala siza kuyicima iBluetooth, nokuba ikwiZiko loLawulo okanye kwiNkqubo yoCwangciso, uthatha isigqibo. Emva koko, siqala kwakhona isixhobo, kuba oku siza kucofa iqhosha Ikhaya kunye neqhosha lamandla kwizixhobo ze-iPhone 6s ngasemva, Kwimeko ye-iPhone 7, ukuqala kwakhona kubangelwa ngokucinezela ivolumu phantsi kunye neqhosha laMandla.
Nje ukuba isixhobo siqale kwakhona, siya kujonga ukuba siyasebenza, siza kuqala iBluetooth kwaye sizame ukuphinda sixhume isixhobo esasibangela iingxaki.
2. Khohlwa isixhobo seBluetooth uze uqhagamshele kwakhona
Enye into enokubangela ukumisa kwakhona ukubhangqa ngesixhobo seBluetooth kukusebenzisa into ethi "ulibale isixhobo" kwaye uphinde uyibhangqe. Ngale nto siza kuya kuseto lwesicelo kwaye nakwimenyu yeBluetooth. Ngaphakathi siza kubona uluhlu lwezixhobo esidityaniswe ne-iPhone, ke siya kukhangela leyo inomdla kuthi kwaye siza kucofa kwi «i» kwaye iya kungena kulwazi lwesixhobo. Emazantsi siza kubona ukuba «i-olvidar i sixhobo«Ngaba ngumsebenzi ebesiwufuna kwaye siza kuwukhetha. Ngoku isixhobo asizukuqhagamshelwa, ke kuyakufuneka siphinde sidibanise njengesiqhelo. Ngokubanzi, olu lukhetho olusebenza kwezona zikhankanyiweyo ngaphambili.
3. Buyisela useto lwenethiwekhi
Kuya kufuneka silumkise ukuba kwiimeko ezininzi, ukuseta useto lwenethiwekhi kusibangela ukuba siphulukane neepassword ze-iCloud Keychain. Lo msebenzi uza kuseta kwakhona iBluetooth, iWiFi kunye noseto loqhagamshelo lwedatha yefowuni. Siyakhumbula ukuba useto lwenethiwekhi lokugqibela lomnikezeli ngenkonzo luya kucinywa, kodwa akukho nto yenzekayo, iya kusicela ukuba siyibuyisele ngokukhawuleza nje xa siqala isixhobo ngeSIM efakiwe. Ke, siya kuya kuseto lesicelo ukukhetha ukhetho ngokubanzi. Ekupheleni kwayo yonke imenyu yokusetha kwakhona, apho sifumana khona iindlela zokubuyisela i-iOS kwisixhobo. Phakathi kokusetha kwakhona izicwangciso siya kufumana «Hlaziya useto lwenethiwekhi«, Siza kucinezela kwaye silandele imiyalelo.
4. Ukuxilongwa kwesixhobo ngu-Apple
Ukuxilongwa yindlela abasebenzi be-Apple ekufanele bafumane ngayo ukusilela kwehardware kwisixhobo se-iOS ngokukhawuleza, nam ndiye ndaneengxaki ngeBluetooth kwi-iPhone 6s yam nakwisifo esenziwe kwiVenkile yeApple yalumkisa iimpazamo kwiBluetooth. Zimbini iindlela zokucela ukuxilongwaNgokusebenzisa i-Apple Chat, okanye ngokucela ngokuthe ngqo ukutyelelwa kwi-SAT kwiVenkile ye-Apple, siya kuqhuba isifo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Ungazilungisa njani iingxaki zonxibelelwano lweBluetooth kwi-iOS 10
UNoelia Herrero sitsho
Ndinomdla kulwazi ukusukela oko kuhlaziyo lokugqibela andinakho ukudibanisa i-iPhone 6S yam ne-IPad yam. Ndizamile onke amanyathelo acetyiswayo, kodwa imeko iyafana. Into emangazayo kukuba i-iPhone iyanxibelelana nezinye izixhobo (izithethi / isitiriyo semoto). Ndingaqhubeka njani? Ndiyabulisa!
Phendula uNoelia Herrero
Yiza, ngokufanayo njengamaxesha onke kodwa sibeka "i-iOS 10" kwaye ijongeka ngathi inqaku elitsha ... Ubuncinci iya kuba ibancedile abanye ukuba awuzange ufunde ngendlela yokunyanzela ukuqala kwakhona kwi-iPhone 7.
URene Stefano sitsho
Zombini izandla zam ezingenasandla kunye neefowuni zam zisebenza ngokugqibeleleyo kwi-iPhone 6 yam, ngoku nge-7 ayinakwenzeka, naziphi na iingcebiso
Phendula kuRene Stefano
Inye kuphela into esombulule ingxaki kum kukufaka inguqulelo engu-6 kodwa eyona nguqulelo indala kwii-10.1.1s ukudibanisa ukusukela ukuba zimbini ezifanayo. Isatyikitywa yiApple ke ndicebisa ukuba uyizame kuba indisombululele yona.
Phezolo 10/11, ndihlaziye ios 11.1.1 kwi-iphone 7 yam kwaye iseti yam yentloko yePatronics yayisebenza. namhlanje ayiyiboni nangona ibluetooth isebenza
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba ungadibanisa i-iPhone 8 Plus kwisithethi sakwaSony ngokuyisichukumisa kunye nesicelo se-iPhone enje ngeSony xperia z3 NFC inayo, nceda ukuba uyazi ukuba ungayenza njani, nceda uxelele Ndibulise kuExtremadura
I-Adobe Lightroom sele ixhasa ifomathi yeRAW
Ukuvuza kubonisa indlela uGoogle anokumohlwaya ngayo yi-EU